Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Daawashada Cusub ee Raaxada iyo Daawashada Sumcadda SABOTEUR oo bilaabay
Calaamadda dahabka iyo daawashada cusub ee SABOTEUR waxay ku dhawaaqaysaa bilawga internetka ee adduunka oo dhan, iyada oo soo bandhigaysa dukaanka mareegaha caalamiga ah saboteur.world. Waxaa la qorsheeyay in la furo bakhaarradeedii ugu horreeyay ee loo qoondeeyay rubuci hore ee 2022.
SABOTEUR waa bilawga boqortooyo cusub. Fikradda ayaa ka soo baxday wadahadal hoose oo dhex maray aasaasayaasha Thomas Sabo iyo wiilka Santiago Sabo. Farshaxanka iyo xaaska Thomas Sabo, Rita Sabo, waxay kormeertaa habka hal-abuurka iyo naqshadeynta astaanta.
Marka la joogo SABOTEUR, ruuxnimadu waxay qaadataa door dhexe oo isku darka suufiyada iyo joomatari, oo ku salaysan wakhtiga sixirka ee alchemy. Qaababka dahabka SABOTEUR waa geesinimo, nashqaddeeda ugu yar, oo ku cusub habka ay u wajahdo jirka. Astaantu waxay ka kooban tahay laba xariiq oo wax soo saar ah, Elemental iyo Sacra, oo ay ku jiraan silsilado isku xidhan oo adag, qaabab joomatari, iyo dhegaysi dib loogu soo celiyo calaamado aan wakhti lahayn. Mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan waa meeraha xurmada leh, oo ah xadhig si uu inoogu xasuusiyo sida loo qadariyo adduunyadayada gaarka ah iyo xaqiiqooyinka ay tahay inay inoo ahaadaan.
Marka laga soo tago falsafada xafidan ee maskaxda iyo kheyraadka, calaamaddu waxay diiradda saartaa isticmaalka agabka qaaliga ah, farshaxanimada aan la dafiri karin iyo tayada ugu sareysa. Dahabka ayaa ka kooban 925 Sterling silver, 18k huruud ah iyo dahab cad, macdan gaar ah iyo dheeman Fairtrade cad iyo madow. Saacadaha ku jira labada ururinba waxa lagu sameeyay khibrad Swiss ah. SABOTEUR wuxuu higsanayaa inuu abuuro dahabka loogu talagalay daa'imka, wuxuuna aaminsan yahay in u gudbinta dahabka la jecel yahay ee sida wanaagsan loo xidho jiilalka mustaqbalka ay qayb ka tahay hab nololeed oo miyir leh.